“Haddii aan markale dhalan lahaa, goolhaye ma aanan noqdeen” – Valdes – Gool FM
(Barcelona) 31 Mar 2020. Victor Valdes oo ka mid ahaa goolhayeyaashii ugu wanaagsanaa ee taariikhda Barcelona ayaa sidoo kale leh tilmaamo kale oo ammaan ah, balse isaga qudhiisa ayaa aaminsan inaysay jirin weyneynta la weyneysiiyo.
Ka mid noqoshada shaqaalaha tababarka ee Barca ayaa ku koobnaatay waqti gaaban, balse maalmo qurux badan ayuu ku qaatay gudaha garoonka inkastoo dhaawac soo afjaray waayihiisii ciyaareed ee Camp Nou.
Inkastoo uu toban sano ka badan shaqaba waardiye kaga ahaa Barcelona, badbaadinno muhiim ah u sameeyay, kula guuleystay koobab badan oo ay ugu waa weyn yihiin Champions League iyo La Liga oo ay u dheer tahay Koobka Adduunka oo xulka Spain la qaaday, shaqsiyanna ku guuleystay abaal-marinta la siiyo goolahaya ugu wanaagsan sanadka La Liga ee Zamora, haddana Valdes ma uusan dooneyn inuu noqdo goolhaye.
“Haddii aan markale dhalan lahaa, ma aanan noqon lahayn goolhaye,” ayuu yiri Valdes.
“Ma aysan ahayn waddo sahlan, mana ii ceymiso dhammaan sanadihii aan dhibtoonayay.
“Waxaa isoo maray maalmo badan oo aanan rabin, waxaan u ciyaarayey maadaama ay iigaga dhaadhiciyeen sidii nin da’yar ah, anna waan aqbalay waddadaas.
“Ma aanan rabin inaan noqdo caan, kuma aanan raaxeysanayn marka ay aniga iga hadlayaan, gaar ahaan marka aanan mudnaanta lahayn; kubadda cagta waa ciyaar kooxeed.” ayuu hadalkiisa ku daray goolhayahii hore ee Barcelona iyo xulka qaranka Spain ee Victor Valdes.